Baaq Taageero oo ku wajahan Guulaha ay ciidanka Somaliland ka soo hooyeen hawlgalkii ciidan ee Tuulada Saax-dheer(FRIDAY - 29/August/2014)
Dallada Somaliland Societies in Europe (SSE) oo kulmisa Jaaliyadaha Somaliland ee Yurub waxay fariin taageero ah u dirayaan ciidamadda Somaliland oo maalintii Khamiista ee 28(ka) Ogoosto ku waabariistay tuulada Saax-dheer si ay u sugaan nabada iyo deganaanshaha Somaliland. SSE waxay hawl galkan ciidan u aragtaa mid lagu fashilinayay mid ka mid ah dibindaabooyinka la rabo in lagu wiiqo midnimada iyo is-huwanaanshaha dadka reer Somaliland.
Ugu horreyn Dallada SSE waxay tacsi u direysaa dadkii iyo ciidankii ku geeriyoodey hawl galkan ciidan, waxaanay Ilaahay uga baryayaan inuu naxariistiisa ka waraabiyo (Aamiin). Sidoo kale waxay caafimaad taama u rajaynayaan kuwa uu dhaawacu ka soo gaadhay. Dallada SSE waxay hawl galkan ciidan u aragtaa mid lagu difaacayay Qaranimada iyo karaamada Somaliland, kaasoo dareen ahaan aanu la qaybsanayno ciidanka Somaliland oo iyagu naftooda u hibeeyay difaaca dalka iyo dadka reer Somaliland.
Sidoo kale Dallada SSE waxay taageero u muujinaysaa Xukuumadda, Golayaasha Qaranka iyo shicibka reer Somaliland oo taageero joogto ah la garab taagan ciidanka. Walow ciidanka Somaliland uu yahay mid aad u nabad jecel isla markaana ku dedaala nabada iyo xasiloonida ayaa talaabadani ciidan ee ay ku dhaqaaqeen ay tahay mid lagu khasbay, maadaama kooxo iyo shakhsiyaad isku tagey ay maleegayeen inay waddanka gudihiisa ka fuliyaan ficilo ka dhan ah danta guud ee dalka iyo dadka reer Somaliland.
Dallada SSE waxay ciidanka uga hambalyaynaysaa guusha balaadhan ee ay ka soo hooyeen hawlgalkan ay ka fuliyeen tuulada Saaxdheer oo ka tirsan Gobolka Sool. Waanu dareensanahay guulaha hawlgalkiinu in aanay aheyn kuwo dhayal iyo sahal ku yimid, balse aad la timaadeen ficilo ku salaysan dedaal, karti, daacdanimo iyo weliba xirfad ciidan oo xeel-dheer iyo talo saarasho Alle. Waa tallaabo fariin cad u direysa dhammaan cadowga Somaliland gaar ahaana kuwa raba inay dhanataalaan nabada iyo xasiloonida Ilaahay ku manaystay shicibka reer Somaliland ee nabada jecel. Waa talaabo aanu rajaynayo inay cashar iyo waayo aragnimo ku qaataan kuwa weli u soo hanqal taagaya inay carqaladeeyaan wanaaaga iyo samaha Somaliland ay ku sugantahay.
Dallada SSE iyada oo ku kasloon mas’uuliyadda ciidanka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa haddana waxa aanu ka codsanaynaa in dhammaan maxaabiista lagu qabtay hawlgalkan ciidan loola dhaqmo si ay banii’aadnimo ku jirto.
Ugu dambeynta baaqan taageero waxa aanu uga faa’iideysanaynaa in dhammaan shicibka reer Somaliland ay dhinac uga soo wada jeesteen adkeynta, xoojinta midnimada iyo isku duubnida dadka reer Somaliland meel ay ku suganyihiinba. Dallada SSE iyada oo dareensan dedaalka ay ku jiraan dhammaan Golayaasha Xukuumadda ayaanu si gaara uga codsanaynaa Dowladda ama xukuumadda Somaliland inay xoojiyaan xidhiidhka, dhegeysiga cabashooyinka jira si looga hortago in cadowga Somaliland uu fursad u helo inuu si khaldan uga faa’iideysto qaar ka mid ah shicibka reer Somaliland.
Markale ayaanu baaqan hambalyo la qaybsanaynaa ciidanka Jamhuuriyda Somaliland, Xukuumadda iyo dhamman shicibka reer Somaliland.
Allah ayaa mahad leh.